Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : သမုိုင်းထဲကရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ထဲကသမုိုင်း Gandhi
သမုိုင်းထဲကရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်ထဲကသမုိုင်း Gandhi
(English for All မဂဇင်း မတ်လ ၂၀၁၄ တွင်ပါရှိသောဆောင်းပါး)
Gandhi (ဂန္ဓီ) ဟုအမည်တွင်သော ရုပ်ရှင်ကားကြီးသည် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကာလ အတွင်း အနိယတွင် ဗြိတိသျှအစုိုးရ အုပ်စုိုးစဉ်ကာလ ဗြိတိသျှကို ဆန့်ကျင်ဦးဆောင်ခဲ့သူ အကြမ်းမဖက်သော လူထုခေါင်းဆောင် Mahatma Gandhi (မဟတမဂနီ) ၏အတ္ထုပတ္တိကုို ရုိုက်ကူးထားသော ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဂန္ဓီအဖြစ် Ben Kinsley ကသရုပ်ဆောင်ကာ ဒါရုိုက်တာမှာ Richard Attenborough ဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်သည် ၁၉၄၈ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက် ဂန္ဓီလုပ်ကြံခံခဲ့ရသော နေ့တွင်စတင်ထားသည်။ ဂန္ဓီသည် သူ၏သမီးများ၊ သူ့ကုိုပြုစုနေသူများ၏ အကူအညီဖြင့် သူ့အားထောက်ခံသူများ၊ ရုိုသေကုိုင်းရုိူင်းကြသူများ နှင့်တွေ့ဆုံရန် လမ်းလျှောက်ထွက် လာသည်။ လူအုပ်ကြီးကြားထဲတွင် Na-huram Gode အမည်ရှိလူတစ်ဦး ကလုိုက်ပါလာကာ ဂန္ဓီရှေ့သုို့ အရောက်တွင် သေနတ်ဖြင့် အလွတ်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ဂန္ဓီသည် “ဘုရားသခင်“ (Oh! God) ဟုညီးတွားရင်း ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားသည်။ ပြီးနောက် ဂန္ဓီ၏အသုဘအခန်းအနား ကိုဆက်လက်ပြသ သွားသည်။
ထုိုအသုဘအခန်းအနား ကုိုပုို့ဆောင်ကြသောလူအုပ်ကြီးများ၊ ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေသူများ၊ တစ်ကမာလုံးနှမျော ၀မ်းနည်းမူများစွာကုို ထုိုအဖြစ်အပျက်ကုို ပြသနေစဉ်အတွင်း အစီအစဉ် ကြေငြာသူက နောက်ခံပြောပြ သွားပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဂန္ဓီသည် အကြမ်းမဖက်ပဲ ဥပဒေကုို ဆန့်ကျင်ခြင်းကုို လက်တွေ့အသုံးပြု သွားခဲ့သူ အထင်ရှားဆုံး ပုဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ “ဥပဒေများသည် မည်ကဲ့သို့ပင် မတရားစေကာမူ ထုိုဥပဒေကုို ချိူးဖောက်ခြင်းသည် နုိုင်ငံ၏တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကုို မထိခုိုက်စေရ။ ဤနေရာတွင် ဥပဒေချိူး ဖောက်သူများဘက်မှ ကုိုယ့်ကိုယ်ကုိုယ်ထိန်းနုိုင်ရန် အလွန်အရေးကြီးသည်။ အီကိစတွင် မဟတမဂနီသည် သူ၏တပည့်များကုို အလွန်ခက်ခဲစွာ ပညာပေးစည်းရုံးခဲ့ရသည်။“ ဟူရွေ့ John Rawls)ဂျွန်ရော့ - နုိုင်ငံရေး ဒသနပညာရှင်တစ်ဦးက ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
အကြမ်းမဖက်ပဲ ဥပဒေကုိုဆန့်ကျင်သောလုပ်ရပ်သည် စည်းမကျော်အောင် အလွန်သတိထား၍ လုပ်ရသော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး နည်းနည်းမှ အမှားမခံ သောလုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထုို့ကြောင့် လုပ်သာသူဘက်မှ အလွန်ပညာပြည့်ဝဖုို့ လုိုသည်။ အောင်မြင်ဖုို့အလားအလာ မှာလည်းအလွန်နည်းသည်။ ထုို့ကြောင့်လည်း လုပ်သောသူ တော်တော်နည်းသည်။ ဂန္ဓီသည် အကြမ်းမဖက်သောနည်းကုို အသက်ပေးကာ လုပ်ပြသွားခဲ့သည်။ သူ့ကုိုအာဏာပုိုင်တွေကလည်း မကြိုက်၊ သူ့ဘက်သားတွေကလည်း မကြိုက်တာကုိုခံရသည်။ ထုို့ကြောင့် သူု့လုိုရုိုးသားအေးဆေးသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ၏ဘ၀သည် မတရားသော လောကကြီးထဲမှာ မွေးဖွားလာရခြင်းကုိုက တော်တော်နှမျောစရာ ကောင်းသည်။
ရုပ်ရှင်အစပုိုင်း သူ၏အသုဘအခမ်းအနားတွင် သူ့အားဂုဏ်ပြုသောစကားတွင် မဟတမဂန္ဓီ ၏ထူးခြားသော ၀ိသေသကုို ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်မှာ လွမ်းစရာဖြစ်ပါသည်။
“ချမ်းသာကြွယ်ဝမူမရှိ ….. ပုိုင်ဆုိုင်မူဘာမှမရှိ ….. အစုိုးရကချီးမြင့်ထားတဲ့ ရာထူးဂုဏ်ဒြဗ်မရှိ …… အစုိုးရ၀န်ထမ်းလည်းမဟုတ်တဲ့ ရုိုးရုိုးသာမန်လူသားတစ်ယောက်ပါ။ …..သူက စစ်တပ်ရဲ့ အကြီးအကဲလည်းမဟုတ်…ကျယ်ပြောတဲ့ မြေပုိုင်ရှင်တစ်ဦးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ပုံစံက….. သေးသေးညှပ်ညှပ်…… အသားညိုညှက်ညှက်…..။ သူ့ရဲ့ အဆင်တန်ဆာဆုိုတာ ကလည်း…. ခါးအောက်ပုိုင်း လုံရုံလေး ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ခြုံလွှာလေးသာပါ…။ အုို…… ကြည့်လုိုက်စမ်းပါဦး ….. ဒီလုိုလူသားတစ်ဦးအတွက်…. တကမ္ဘာလုံးက အစုိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ ….. ဂုဏ်သရေရှိ ပုဂိုလ်တွေ အားလုံးက စုပေါင်းပြီး လေးလေးစားစား ဂုဏ်ပြု ဆုတောင်းပေးနေကြရတယ်……“
‘…. without wealth… without property …. without official titles or offices … Mahatama Gandhi … was not the commander of armies…. Noraruler of vast lands…. Yet men…. governments, dignitaries from all over the world…. have
joined hands today to pay homage …. to this little brown man in the loindoth.’
Posted by Junior Win at 7:44 AM